मुलक 'लकडाउन', यस्तो बेला के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन ? | Citizen Post News
मुलक 'लकडाउन', यस्तो बेला के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन ?
२०७६ चैत्र ११ गते ०९:४३
काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्ने भन्दै एक साताका लागि सिंगै मुलुकमा ‘लकडाउन’ गरेको छ । फ्रान्सवाट काठमाडौं फर्किएका एक जना नेपाली नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै सरकारले मुलुकलाई ‘लकडाउ’ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले सोमवार गरेको निर्णय अनुसार चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते साँझ ६ बजेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ । लकडाउन उल्लंघन गरेमा जो कसैलाई ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
कर्फ्यु भन्दा के कुरामा फरक छ ‘लकडाउन’ ?
‘लकडाउन’लाई धेरैले कफ्र्यु रुपमा बुझेका छन् । नेपाली समाजले कर्फ्युको अनुभव बटुले पनि ‘लकडाउन’ को अनुभव पहिलो पटक गर्दैछन् । बाँके, कैलालीलगायतका जिल्लामा सोमवार दिउसैदेखी कफ्य सुरु भएको थियो । कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कफ्य आदेश जारी गरेको थियो भने बाँके जिल्ला प्रशासनले ‘जनता कर्फ्यु ’ घोषणा गरेको थियो ।
जुन शब्द प्रयोग गरिएपनि आम नागरिकले बुझ्नु पर्ने कुरा यो अवधिमा प्रशासनको अनुमति विना कँही कतै हिँडडुल गर्न पाइन्न । कफ्य प्राय आन्दोलनको समयमा आन्दोलनकारीले उग्ररुप प्रस्तुत गरेपछि लाग्ने गरेको थियो । अहिलेको स्थिती फरक छ । कुनै आन्दोलन भएको छैन र आन्दोलनकारीले उग्ररुप प्रस्तुत गरेका पनि छैनन् ।
आन्दोलन भन्दा ठूलो महामारी:
अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको र यहि संक्रमणको कारण विश्वमा ११ हजार बढीको मृत्यु भैसकेकाले नेपालमा पनि संक्रमण नदोहोरियोस् भन्नका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको हो ।
के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन ?
लकडाउनको बेला पत्रकारहरुले पनि आफुखुसी हिँडडुल गर्न पाउदैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको पास लिएर मात्रै हिँडन पाइन्छ ।औषधि, तरकारी, खाद्यान्न, पानी, दूध, विद्युत, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन र फोहरमैला संकलनका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लकडाउनमा छुट हुन्छ । यस्तै औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, पानी, दूध र इन्धनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन हुन पाउँछन् । कोही बिरामी परे र अस्पताल जान पर्ने भयो भने एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल जान सकिन्छ । राजधानीबाट